Creative Writing » 2014 လည်ပြန်	24
ခင်ဇော် says: ဟိုနေ့ကတောင် သတိရနေတာ။
Ma Ma says: သမင်လည်ပြန်ကြည့်စရာ………….
အကောင်းတွေ အများကြီး ကြုံခဲ့/လုပ်ခဲ့နိုင်တာ အားကျတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: စာ​တွေအများကြီး​ရေးပြီးအလုပ်​​တွေအများကြီးလုပ်​နိုင်​တာကို အားကျတယ်​
Kaung Kin Pyar says: ဗဟုသုတရမယ့် စာတွေ အများကြီးရေးခဲ့တာပဲ အာတီဒုံ….။ အာတီဒုံ့လို ရေးတတ်ချင်တယ်…။
Yae Myae Tha Ninn says: ကောင်းလိုက်တဲ့ သုံးသပ်ချက်ဗျာ… အဲလို ပြန်ကောက်နုတ်ပြီး ရေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တာ လိုက်လို့…
အနော်ကတော့ 2014 မှာ အိုသွားတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
kyeemite says: .တော်တော်လုပ် တော်တော်ရေးနိုင်တဲ့အာတီဒုံပါပဲ
.တစ်နှစ်အတွင်းရေးသွားတာ ကိုယ်တလျှောက်လုံးရေးလာသလောက်ရှိတယ် .(2) 2013 Review ၂၀၁၃ အတိတ်ခြေရာကောက်– padonmar
Maung Thura says: ရေးခဲ့သမျှပိုစ့်တိုင်းဟာ
လင့်ခ်လေးတွေကို တိုက်ရိုက် ကလစ်ပြီးဝင်လို့ရအောင် လုပ်ထားရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်လို့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: အဲလို လင့်ခ်တွေဘယ်လိုတင်ရတယ်ဆိုတဲ့ ပို့စ် အံဇာ ရေးတာထင်တယ်။လိုက်လုပ်ကြည့်တာ ကိုယ် အ လွန်းလို့ မရဘူး။
kai says: သာဓုပါဗျို့…။ မြင့်မြတ်တဲ့အလှူရှင်ဘ၀.. လျှောက်ခဲ့ရာ.. ခြေရာတွေပေါ့…။ Charity begins at home, but should not end there.
kai says: တနေ့ကပဲ.. အသိတယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်တာမှာ…
padonmar says: သူကြီးရေ၊
Shwe Ei says: -အန်တီဒုံ့ စာကို ဖတ်ပီး..ကွကို ပြန်သုံးသပ်ဖို့ သတိရပါတယ်…
padonmar says: ရွှေအိလေး။
Mr. MarGa says: ရှက်လိုက်တာဗျာ…
ဖားသက်ပြင်း says: ၂၀၁၄မှာပတ်​သတ်​ဖူးတဲ့ကရင်​မ​လေး​ယောက်​ကိုမုန်းတယ်​ဗျာ
မြစပဲရိုး says: ဟို ဗေဒင်ဆြာ ဟောတာတော့ မှန်ပြီထင်ရဲ့။
အောင် မိုးသူ says: တီဒုံလည်း ရေးအားအတော်ကောင်းတာပဲ။
padonmar says: ကေဇီ၊မမ၊မယ်ပု၊ကင်းကောင်ပြာ၊မောင်ရေမြင်း၊ဦးမိုက်၊သဂျီး၊ချွေအိ၊အလက်ဆင်း၊သဂျား၊မိဂီ၊အရီးမြ၊ဘကြီးအောင်
La Yeik says: အန်တီဒုံ 2014 မှာ အများကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တာပဲ…ကောင်းတာတွေချည်းပဲ…မီးတို့တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းတာလုပ်မိသလား ဆိုးတာပဲလုပ်မိသလား မခွဲခြားနိုင်သေးဘူးရယ်…
padonmar says: လရိပ်ရေ
manawphyulay says: တီတီရေ… ကြိုးစားထားပါ မနောကတော့ မလိုက်နိုင်သေးတော့ Top One ဖြစ်အောင် လုပ်ထားနော်… အမြဲ အားပေးနေပါတယ်…. ဖိုက်တင်း… နှစ်သစ်မှာလည်း စာတွေ အများကြီး ရေးပါဦးနော်…
padonmar says: မနောတို့ ရေးအား၊ပို့စ်တင်အားကိုတော့ ဘယ်လိုမှ မမီနိုင်ပါဘူးကွယ်။